China Photochromic pigment uv pigment ruvara shanduka upfu nezuva chezuva kugadzira uye fekitori | Topwell
Photochromic pigment rudzi rwema microcapsule. Neupfu hwepakutanga hwakaputirwa muma microcapsule.Powder zvinhu zvinogona kuchinja ruvara muchiedza chezuva. Rudzi urwu rwezvinhu rune hunhu hweyakajeka ruvara uye nemamiriro ekunze akareba. Inogona kuwedzerwa zvakananga zvichienderana nechigadzirwa chakakodzera. Isu tinogadzira iyo poda inoyera saizi ingangoita 3-5 um, inoshanda chikamu chevasungwa chakakwirira kupfuura zvimwe zvakafanana zvigadzirwa mumusika. Kupisa kwekupisa kupisa kusvika kumadigiri 230.
♥ Ruvara rwakatsvuka, ruvara runonzwisisa
♥ Yakakwira kupisa tembiricha, solvent kuramba
♥ Super refu ekunze kuramba
♥ yakasimba kuchinjika, zviri nyore kupararira zvakaenzana
♥ Tenderana neGG18408 kuyedzwa kwechigadzirwa
1. Ingi. Inokodzera mhando dzese dzekudhinda zvinhu, kusanganisira machira, bepa, synthetic firimu, Girazi ...
2. Bemhapemha. Inokodzera marudzi ese epasi pekupfeka zvigadzirwa
3. Jekiseni. Inoshanda kune ese marudzi epurasitiki p, PVC, ABS, silicone rabha, yakadaro
sezvo jekiseni zvinhu, extrusion Kuumbwa
Photochromic pigment inogona kushandiswa kupenda, inki, indasitiri yepurasitiki. Mazhinji dhizaini yechigadzirwa iri mukati (hapana nzvimbo inopenya zuva) isina ruvara kana yakajeka ruvara uye yekunze (nzvimbo yezuva) ine-yakajeka-mavara.
Photochromic Nguruve dzinonyanya kunetseka nekukanganisa kweye solvents, PH, uye shear kupfuura mamwe akawanda marudzi e pigment. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti pane misiyano mukuita kwemavara akasiyana siyana kuitira kuti yega yega inofanira kunyatso kuyedzwa pamberi pekutengesa kunyorera.
Photochromic pigments Iva nehutano hwakanaka kana uchichengetwa kure nekupisa uye chiedza. Chengeta pazasi pe25 Deg.C. Usabvumire kuti itonhe, sezvo izvi zvichizokanganisa mackupikisi echromic. Kuratidzwa kwenguva refu kune UV mwenje kunodzikisira iyo photochromic capsule kugona kushandura ruvara. Hupenyu hwesherufu hwemwedzi gumi nemaviri hunovimbiswa kupihwa kuti izvo zvinhu zvinochengetwa munzvimbo inotonhorera uye ine rima. Kuchengetedza kwenguva yakareba kupfuura mwedzi gumi nemaviri hakuna kukurudzirwa.
Zvadaro: Thermochromic pigment ye thermochromic Paint Thermochromic Ink Thermochromic Mucheka